“မရောစကောင်း ရောစကောင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » “မရောစကောင်း ရောစကောင်း”	10
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 2, 2016 in My Dear Diary | 10 comments
“မရောစကောင်း ရောစကောင်း မရောင်းစကောင်း ရောင်းစကောင်း”
ရွှေမြန်မာတွေက ဆီအသုံးကြမ်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးသုံးတာက ပဲ ဆီ ဆိုတဲ့ မြေပဲဆီ။
အညာဘက်မှာတော့ နှမ်းဆီ ကိုအသုံးများပါတယ်။
ဆုံဆီ စစ်စစ်လေးများဆိုရင်အရမ်းမွှေးတော့ ကြိုက်ကြပါတယ်။
ဒါက ရှေးရှေးတုံးက အကြောင်းတွေပါ။
တိုင်းပြည်က လူမွဲစာရင်းဝင်ချိန်မှာတော့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလဲ
မသုံးနိုင်ဆို ၀င်ငွေမှ မကောင်းတာကိုးဗျ။
အဲတော့ ပဲဆီအစား သူများနိုင်ငံက ထွက်တဲ့စားအုန်းဆီဆိုတာကို တင်သွင်းပြီး သုံးကြရပါတော့တယ်။
စားအုန်းဆီ မှာ အခွံကထွက်တဲ့ အဆီက လူစားဘို့ပါ။
အစေ့ကထွက်တဲ့အဆီကတော့ ဆပ်ပြာချက်တာတို့ ဘာတို့လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းသုံးဆီပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဈေးပေါတယ်ဆိုပြီးဝယ်စားခဲ့ကြတဲ့
အခွံကထွက်သလား အစေ့ကထွက်သလား မသိပါဘူး။
နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းခွင့် ရှိသူ တင်သွင်းပေးတာကိုဘဲ ၀ယ်စားခဲ့ကြရတာပါ။
နောက်ပိုင်းမှာ ပုံးတွေ ပေပါတွေထက် ပိုပြီးဈေးပေါတဲ့
သင်္ဘော အောက်က ၀မ်းဘိုက်ထဲမှာထည့်လာတဲ့ ကန်ဆီ
ပဲဆီဈေး နဲ့ စားအုန်းဆီ ဈေးက ကွာလေတော့ ကျနော်တို့ရွှေမြန်မာများမှာ
အကောင်းကြိုက်သော်ငြားလဲ ဈေး ပေါတာနဲ့နှစ်ပါးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စားအုန်းဆီစားတာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွှတ်ဘူး
ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကျယ်လောင်လာပေမယ့်လည်း အများစုကတော့စားအုန်းဆီနဲ့ဘဲ
စ ခန်းသွားနေရတော့ ပဲဆီ စစ်စစ်ဆိုပြီးရောင်းနေတဲ့ စက်သမားတွေမှာ
ပဲဆီနဲ့စားအုန်းဆီဈေးကွာတော့ ပဲဆီသမားက မရောင်းရတော့ပါဘူး။
ဒီတော့ ပဲဆီနဲ့စားအုန်းဆီ ရောပြီး ဈေးလျှော့ရောင်းပါတော့တယ်။
တစ်ယောက်က အစ တစ်ရာဆိုသလို စက်သမားအားလုံးနီးပါးရောပြီးရောင်းပါတယ်။
အင်မတန်မှ အညာခံရတာကို နှစ်သက်တဲ့ ရွှေမြန်မာတွေက
ရောထားတဲ့ဆီကို ပဲဆီလို့ တံဆိပ်တပ်ပြီးရောင်းမှ ၀ယ်ပါတယ်။
တစ်ပိဿာ သုံးထောင်လောက်နဲ့ ၀ယ်လို့ရနေရင် ရောထားတယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုပါဘူး။
စားအုန်းဆီနဲ့ရောတာက နွေမှာအဆင်ပြေပေမယ့် ဆောင်းရောက်တော့ စားအုန်းဆီကခဲပါတယ်။
ဒီတော့ အေးတဲ့အချိန်မှာလဲ မခဲဘူး ပဲဆီထက်ဈေးပေါတဲ့ ပဲပုတ်ဆီ တို့ နေကြာဆီတို့ ၀ါစေ့ဆီတို့ နဲ့ရောပြန်ပါတယ်။
ခက်တာက ပဲပုတ်ဆီတို့ ဘာတို့ ကအနံ့ပြင်းလေတော
ခက်တာက ပဲပုတ်ဆီတို့ ဘာတို့ ကအနံ့ပြင်းလေတော့ ဒီအနံ့တွေပျောက်အောင်
တရုပ်ဘက်က၀င်လာတဲ့ ပဲဆီအနံ့ကို ထည့်ပါတော့တယ်။
အရင်က ဆီရောတယ်ဆိုတာက ပဲဆီထည့်ထားတဲ့ကန်ထဲကိုစားအုံးဆီသွန်ထဲ့လိုက်ရုံပါဘဲ။
တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာတော့ စက်ကြီးသမားများက ရိုးရိုး မရောဘဲ ဆီနှစ်မျိုးစပ်ပြီးမွှေစက်
ထဲမှာ ထည့်ပြီး ရောပါတယ်။
အချို့တွေကလဲ ဆီမခဲအောင် ဆေးထည့် တယ်လို့ ပြောသံကြားဘူးပါတယ်။
ဒါတွေက စက်ကြီးသမားတွေမှ လုပ်နိုင်တာပါ။
ဒီအနံ့တွေ မခဲဆေးတွေက လူကိုအန္တရာယ်ပြုမပြုတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။
ဘယ် ဓါတုဗေဒပစ္စည်း မဆို လူကို အနည်းနဲ့အများထိခိုက်စေတာကတေ့ာသေချာပါတယ်။
အကြမ်းဖျဉ်းပြောနိုင်တာကတော့ ရောင်းတဲ့ဈေးပေါလေ ပဲဆီပါဝင်တာနည်းလေ အခြားဆီတွေပါဝင်မူ့များလေလေပါဘဲ။
အခုလို ကျန်းမာရေး အသိစိတ်ဓါတ်တွေ မြင့်မားလာချိန်မှာတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာဖြစ်သလိုရောင်းချနေတဲ့ ဆီတံဆိပ်တွေကို
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာနကဆိုင်တွေမှာ ဈေးတွေမှာ လိုက်လံစစ်ဆေးပြီး စားသုံးရန်မသင့်တဲ့ဆီတံဆိပ်တွေ
ပဲဆီမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပဲဆီသန့် လို့တပ်ထားတဲ့ တံဆိပ်တွေကို
သတင်းစာတွေ ဂျာနယ်တွေကနေ ပြီး ကြေငြာပေးပါတယ်။
ပန်းပန်လျှက်ဘဲဆိုသလို ဈေးကွက်ထဲမှာ ဆက်လက်ခိုင်မြဲနေတဲ့
ရောနှောမထားဘူးဆိုတဲ့ ပဲဆီတွေကရော တကယ်စားသုံးလို့သင့်တော်ပါသလားလို့ မေးလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပဲဆီစက်အတော်များများကတော့ နေမလှန်းတာများပါတယ်။
(မြေပဲဆံအကောင်းဈေးနဲ့ အပုပ်ဈေးကလဲ ကွာတယ်လေ)
အဲလို့ ပဲအပုပ် နဲ့ကြိတ်ပြီး ပုံမှန်ပဲဆီဈေးထက်လျှော့ရောင်းပါတယ်။
လေးဖြူတစ်ခါပြောဘူးတဲ့ အမျုိးအရင်းကြီးတွေက စိတ်မချရဘူးဆိုသလိုဘဲ မြေပဲဆံဘဲကြိတ်ပါတယ် ဘာမှမရောဘူးဆိုပေမယ့် မိူတက်နေတဲ့မြေပဲကလည်းကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတယ်ဆိုတော့လဲ
ဒါကြောင့်လဲ စက်သမားတိုင်းက FDA ဂါထာရွတ်နေကြပါတယ်။
ရောဆီမရောင်းရတော့ဘူးဆို ဘာသွားရောင်းတော့မလဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပါဘဲ။
နယ်မြို့တွေမှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစားသုံးရန်မသင့်လို့ ကြေငြာထားခဲ့တဲ့ တံဆိပ်တွေကို မရောင်းရတော့ဘူးဖမ်းမယ်ပစ္စည်းသိမ်းမယ်ဆိုပြီး
သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးချိန်မှာ တော့ စားသုံးရန်သင့်ပါပြီလို့ ပြန်လည်ကြေငြာပေးလေ့မရှိပါဘူး။
စားသုံးရင်မသင့် တဲ့ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေ(အရောင် အနံ့)
တွေကို ဖြစ်စေ အရည်အသွေးမရှိတဲ့ ဆီတွေကိုဖြစ်စေ
စံနစ်တကျ ရောနှောထားတဲ့ဆီကိုတော့ ရေးစေသင့်ပါတယ်။
ရွှေမြန်မာအများစုက တစ်ပိဿာ ငါးထောင်အထက်မှာရှိတဲ့
ပဲဆီသန့် ကို ၀ယ်မသုံးနိုင်ပါဘူး။
စားအုန်းဆီသက်သက် ကိုဘဲသုံးမယ့်အစား ပဲဆီ နဲ့အခြားဆီရောထား
တဲ့ဆီကို တော့ ၀ယ်သုံးနိုင်ပါမယ်။
ရောနှောဆီ ကို လုံးဝမရောင်းရဘူးလို့ပိတ်ပင်လိုက်ရင်
အသေချာဆုံးအချက်က စားအုန်းဆီကိုဘဲ အများစုက
ဒါဆိုရင် ပဲဆီစက်အတော်များများ စက်မလည်နိုင်ဘဲရပ်ဆိုင်းသွားမှာပါ။
ဈေးပေါတာကို မရောင်းရ မသုံးရလို့ တားမြစ်ပိတ်ပင်နေမယ့်အစား
ဈေးကောင်းတာကို ၀ယ်သုံးနိုင်တဲ့ ၀င်ငွေရှိအောင် ဖန်တီးပေးသင့်ပါတယ်။
ပေါချောင် မကောင်း ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းကို သုံးပါဆိုတောင်မှ မသုံးပါ။
လူဆိုတာ တတ်နိုင်ရင် အကောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေချည်းပါဘဲ။
လူတိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်လုပ်ငန်းတွေ ရှိနေဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါက အစိုးရ ရဲ့တာဝန်ပါဘဲ။
ပွင့်လင်းမြင်သာ အရာရာကို တံခါးဖွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ
အစိုးရမဟုတ်သော လူမူ့ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ထဲထဲဝင်ဝင်
မြန်မာပြည်မှာ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှာ ၀င်ပြီး ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပြီဆိုရင်
ဟိုအရင်က ရောနှောဆီတွေကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများလဲ
အဆင့်မီပြီး သန့်ရှင်းသောပဲဆီသန့်သန့် စစ်စစ် ကို ဘဲ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ဘို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဦးဆောင်သူကိုယ်တိုင်ဖြောင့်မှန်မှ ကျန်သူတွေကို လမ်းမှန်ရောက်
ကျနော်တို့ရွှေမြန်မာများ ဈေးကြီး တဲ့ ပဲဆီစစ်စစ် ကို ၀ယ်ယူစားသုံးနိုင်တဲ့ ဘ၀တွေကို ရောက်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
kai says: လူတွေဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့.. အမဲသားလိုကျ မစားရ….။ လူငယ်လူရွယ်တွေ.. အသားဓာတ်ရစေတဲ့.. အသားနီတွေကျ.. ခြေလေးချောင်းရှောင်ကြ.. မစားရ..။
သက်သတ်လွတ်ဘာညာ လုပ်နေကြတဲ့.. အ၀ါဂိုဏ်းသားတချို့များက…
လူ.. လူ… လူ့အသက်သေမှာ.. လူ့သက်တန်းတိုမှာမျိုးတွေကျ..ကန့်ကွက်.. ဝေဖန်တရားဟောကြရမှာကို…. လေသံတောင်မဟကြ..။
သင်္ချာမတတ်.. သိပ္ပံနားမလည်.. ခေတ်မမှီသူများကနေ… ဦးနှောက်မုဒိန်းကျင့်ထားတဲ့..
ဒီမိုး.. ဒီလေ.. ဒီလူတွေနဲ့တော့… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း.. ဆယိုနာရဖြစ်ပြီထင်ပါရဲ့..။
အနိစ္စ.. ဒုက္ခီး…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ဂျစ်စူ says: ဘသူမစားခိုင်းဒါလဲပြော
ကို့ဘာသာ ကို့အယူနဲ့ကိုယ် သနားလို့ ဘာလို့
နတ်တွေ မူလီတွေနဲ့ အမျိုးမျိုး မစားကြတာဘဲ ရှိတယ်
ဈေးကလဲ ကြီးတာကြီးကို တော်ယုံ မစားနိုင်ဘူးဟဲ့
ဝက်သား အမဲသား မစားရကောင်းလား
အမဲနှပ်နဲ့ အလှူ လုပ်ကြည့်စမ်းစေ့ချင်ဒယ် ဂယ်ဘဲ
ဘလိုလုပ်ပေးမလဲ ဆင်းစား အကျန်ပေးတာမျိုးကသာ
မြစပဲရိုး says: ထောက်ခံပါတယ် မောင်စိန်ပေါက်။
သူကြီးမင်း နောက်တစ်ခါ ရွှေပြည်သွားရင် အမဲသားဟင်း နဲ့ စတုဒီသာ ကျွေးကြည့်လေ။
လာစားမဲ့ သူမရှိရင် အဆ တစ်သန်း ပြန်လျှော် ပေးမယ်။
kai says: ကာယကံ..၀စီကံ.. မနောကံမှာ.. မနော(စိတ်)ကအရေးကြီးဆုံး..။
သဘောက.. သဘောတရားရေးရာမှာ.. ထိုးသွပ်ခြင်းခံရပြီးမှတော့… ဆာယိုနာရပါခင်ဗျာ.. လို့..။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တချို့ရွာတွေ.. မြို့တွေမှာ.. နွားသတ်လိုင်စင်ကို ဘုန်းကြီးတွေစုပြီးဝယ်တယ်..။
ဒါမျိုးဆိုတာက.. နှစ်ဆယ်စုနှစ်တွေချီ(မှ).. သက်ရောက်မှုရှိ(လာ)တာ..။
အခုပြင်.. အခုလည်းမဖြစ်..။ နောင်.. မျိုးဆက် ၁ခု..၂ခုသွားမှ…။
ဒီနေ့ပဲ.. အသက်၇၀တန်း ဘာသာသာသနာ တသက်လုံးလှူတန်းခဲ့သူတဦးနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်..။
၀ိပဿနာကို တီထွင်သူ နွားမေတ္တာစာရှင်.. လယ်တီဆတော်ကြီးအကြောင်းတောင်နည်းနည်းသိလိုက်ရသေး..။ အင်္ဂလိပ်ပေးတဲ့ဘွဲ့ ပထမဆုံးရတဲ့ ဆတော်ကြီးပေပဲ..။
တောင်ပုလုဆတော်ကြီးဆို.. ၀ိပဿနာအကြောင်းဟောမယ်ပြောမယ်ဆို.. ငါ့ကျောင်းကိုမလာနဲ့လို့.. မဟာစည်ဆတော်ကြီးကို ဆိုဖူးတယ်တဲ့..။
ပိုသိသူတွေ.. မျှပါဦး..။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: နွားမွေးဖို့ မြေ နဲ့ အသားစားနွား တွေ သူကြီး အရင်းအနှီးပေးလေ။
ဘယ် ဘုန်းကြီး က မှ လာ မနှောက်ယှက်စေရဘူး။
အခုဟာက အသားစားနွား မွေးဖို့ အတွက် အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ကမှ အားမပေးတာ။
ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ နို့စားနွား တွေ လောက်ဘဲ အကြီးအကျယ်လုပ်ဖို့ ပါမစ် ရ နေတာကိုး။
အနိစ္စ… Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သူကြီး ပြောတဲ့ နွားမွေးရေး ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ချို့ နဲ့ သိရင် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် မဟုတ်လား။
အရင်းအနှီးသာပေး နှစ် တစ်သန်းကျိန်စာ ကို တောင် တာဝန်ယူပေးမယ်။ ဒုက္ခ… Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်ကတော့ ဘာမှမရှောင်ဘူး အကုန်စားတယ်
Thint Aye Yeik says: ဒီမှာက ဘယ်ဟာတွေက အရောအနှော ဘယ်ဟာတွေက မစားသင့် စားသင့် စသည်ဖြင့် မသိမဟုတ်။ သိကြပေမဲ့ စာသင့် သုံးသင့်တာတွေက ဈေးကြီးနေတာရယ်
ကိုယ်လိုရာကို လိုသလို ရအောင် လုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ငွေရှင်ကြေးရှင်ကြီးတွေသာ…နေလို့ထျုင်လို့ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကို ဖြစ်လို့
အောင် မိုးသူ says: ဟိုသီချင်းလေးပဲ သတိရမိ….
ဘရိတ်ဖတ်စားချိန်တန်လာ……… ပဲပြုတ်လေးခေါ်ဝယ်ကာ………စားမယ်ကျန်လည်း နံတယ်ကွာ။